Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – कमानमा तलब भएको छैन दाल सब्जी किनेर खाने पैसा छैन जसले गर्दा चियाको फुल टिप्न बाध्य
खल्तिीमा सब्जी किन्न सम्म पैसा नरहेको कारण कमानमा श्रमिकहरु चिया पत्तीको फुल टिपेर सब्जी खान बाध्य बनेका छन ।
आज यस्तै घटना ग्रासमोड चिया कमानको हौदा लाइनमा देख्न पाइएको छ ।
यस लाइनका श्रमिक भोक्ता माझी अनि प्रेमलाल उराँवलले पलास्टिकको थैलीमा टिपेर ल्याको चियाको फुल देखाउँदै भने, हामी गरीब श्रमिक परिवार हौं ।
कमानमा तलब भएको छैन । चामल जसोतसो जुटाइन्छ तर दाल सब्जी किनेर खाने पैसा छैन । जसले गर्दा हामी चियाको फुल टिप्न बाध्य बनेका छौं ।
तिनले समस्याबारे बोलदै अझ भने चामल दालको पनि दाम बडाइएको छ । एकत श्रमिकहरुको कमानमा तलब भएको छैन ।
त्यमाथि पनि दैनिकी उपभोग गर्ने चिज विजको दाम बढन थालेकाले हामी झन मारमा परेको तिनको भनाई छ ।
एक महिना दिन भई सक्यो आज सम्म पनि तलब पाउने कुनै छाँटकाँट नै देखिन्दैन प्रेमलाले बताए ।
एक प्रश्नको उत्तरमा प्रेमलालले भने हामी बैंकको नियम कानून बुझदैनौं । बैंकमा गएर लाइनमा लागेर तलब थाप्नु हामी श्रमिकहरुको निम्ति असम्भव रहेको तिनी बताउँछन ।
हामी श्रमिक भएको कारण हाम्रो प्रथमतः पेट भरिनु पर्छ अनि मात्र हामी अरु कुरा बुझने छौं । हैन भने हाम्रो अघि ठुलो कुरा सुनाएर केही पनि नहुने अनि हामीलाई सो विषयसंग कुनै सरोकार पनि नरहेको बताउँछन ।
पुरानो नोट बन्द हुँदा अनि नया रुपया आउँदा हाम्रोे तलब बढने हैन । यसले गर्दा कमानमा स्वभाविक रुपले तबल भएको श्रमिकहरु चाहन्छन ।
चिया उद्योग देशको एक मात्र यस्तो क्षेत्र हो । जहाँ न्यूनतम मजदूरी सम्म तलबको रुपमा श्रमिकहरुलाई दिइदैन ।
जसले गर्दा श्रमिहरुको बजारमा क्रय गर्ने क्षमता धेरै कम हुन्छ । तलब प्रणालिमा कुनै पनि रुकावट आउन साथ यसको प्रत्येक्ष असर मजदुरहरुको दैनिकी जीवनमा पर्न जानछ ।
देशमा भएको नोटबन्धीले सब भन्धा अधिक कम बजटमा चल्ने परिवारहरु प्रभावित बनेको छ । कारण तिनीहरुसंग भविष्यको निम्ति संचय गर्ने आर्थिक क्षमता हुँदैन ।
जसले गर्दा श्रमिकहरुको घर परिवार कम बजटमा भए पनि सुचारु रुपले चलेको हुन्छ । तर देशमा भएको यस्तो घटनाले श्रमिक परिवारहरुको अवस्था सोचनिय बन्दै गइ रहेको छ ।
[Via: The Times Dooars]
Glimpses of GJMY Rally in Support of #Demonetization Held by GJM in #Gorkhaland TA Region Kalimpong Police Organizes Blood Donation and Free Medical Camp
244,954 total views, 2,926 views today
274,475 total views, 2,925 views today
290,706 total views, 2,925 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 290,722 total views, 2,925 views today Comments comments
290,722 total views, 2,925 views today
290,644 total views, 2,925 views today